Xilliga 'Wiilasha' 2 mar horeba waa ay soosaaraan - halkan waa aragtidaada koowaad - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo '' Wiilasha '2 XXXX mar horeba waa ay soo jireenayeen - halkan waa aragtidaada koowaad - BGR
Marka la eego mawduuca, malaha malaha sabab la yaabi karo, laakiin Amazon Wiilasha waxay u muuqataa inay heshay dhagaystayaal aad u badan, taas oo kicisay xiisaha uu u qabo mugdikiisa iyo tarjumida qalloocan ee ifafaaleyaasha superheroes. iyo sidoo kale shaqadiisu ahayd rabshadaha ba'an, qotominta wajiga hore iyo ereyada dhaarta badan.
Way iska cadahay inay Amazon ku kalsoontahay taxanaha markay dib u bilaabatay Wiilasha xilli ciyaareed labaad maalmo ka hor. kii ugu horreeyay xitaa laga dooday adeegga qulqulka dukaanka internetka. Kalsoonidaan taxanaha ah ayaa bixisay sida Amazon usbuucii hore sheegtay Wiilasha horeba waa mid ka mid ah taxanaha telefishanka asalka ah ee inta badan la daawado. Hadana, waxay umuuqataa in Amazon ay rabto inay ka faa iideysato dardar galinta bandhigga isla markaana ay sii deyso xilli 2 sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Toddobaadkii hore, showgan Eric Kripke ayaa sawir la wadaagay Twitter, kaasoo u muuqda inuu xaqiijinayo in xilli-ciyaareedkii labaad uu durba soo baxayay. . Waxaa jira xubno badan oo mashiinka masawirka sawirka leh, oo ay ku jiraan Tomer Capon (Faransiis), Karen Fukuhara (Naagtii), Jack Quaid (Hughie Campbell) iyo Laz Alonso (Naasnuujiye). La yaab maahan, inay dhammaantood dhiig ka buuxaan, sababta oo ah dabcan waxay yihiin:
Xilli ciyaareedkii ugu horeeyay Wiilasha laga soo saaray 'Amazon Prime Video' 26 Luulyo oo leh sideed qaybood oo soconaya ugu dhawaan saacad. Sidaa daraadeed, waa inaanu fileynin marxalado cusub sannadkan, laakiin haddii filimaanta filimka 2 ay mar horeba sii socdaan, waxaa jirta fursad ah inaanan sugin sannad buuxa oo tallaabo weyn ah. geesi sii dhib badan.
1 Xilliga Wiilasha wuxuu hadda ku socdaa barnaamijka 'Prime Prime Video'.
Isha Sawirka: David Buchan / Kaladuwan / Shutterstock